Puntland oo wajahdey waji doorasho oo cusub iyo ololaha ururada siyaasada oo hooseeya – Radio Daljir
Juunyo 11, 2013 3:04 g 0
Garoowe,June 11,2013-Maamulka Puntland ayaa wajahaya waji doorasho ?oo ku cusub kaas oo ah nidaamka loo yaqaan xisbiyada baddan oo qof kastaaba uu codkiisa wax ku dooranayo.
Inkastoo aysan caddayn habka iyo hannaanka ay u dhacayso doorashooyinka golayaasha deegaanka ee la fulayo inay qabsoomaan 15 July 2103 ?ayaa haddana waxaa muuqata in aan laga fursan doonin in wax lagu doorto niddaamkaan cusub ee ay Puntland wajahdey.
Iyadoo ay aad u yartahay muddada ka harsan ?wakhtiga loo cayimay inay dhacaan doorashooyinak golayaasha deegaanka Puntland ayaa haddana waxaan muuqan illaa hadda daddaal iyo ololayaashii looga baahnaa ururada ka qaybgalaya doorashooyina golayaasha deegaanka.
Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland ?ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan (TPEC) ayaa dhawr goor waxaa uu ?wakhti ku daray xiliga la qabanayo doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland,waxaana illaa hadda ay bulshada qaarkeed is waydiinayaan sababta kalifaysa in mudo dhawr goor ah wakhtiga dib loo dhigo.
Dhinaca kale waxaa jirey khilaaf soo kala dhex galay guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland iyo ururada siyaasada ee Puntland kaas oo dhaliyey inay doorashada ka haraan qaar ka mid ah ururada Puntland? oo gabi ahaanba diidey inay ka qaybgalaan doorashooyinka haddii aan la hirgalin dhawr qodob oo ay? sheegeen ?inay muhiim u yihiin qabsoomida doorashooyin hufan oo lagu wadda qanci karo.
Guddiga doorashooyinka Puntland ayaa sheegay inuu muwaadinkasta oo reer Puntland ah ay ?u furantahay inuu u coddeeyo musharaxa? uu taageersanyahay,waxaana dadka codaynaya lagu kala saari doonnaa qaab aqoonsi ah oo ay xaqiijin doonnaan Nabaddoonada qabbaa?ilku, sida ay sheegeen guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland .
Qaar baddan oo ka mid ah bulshada reer Puntland ayaan wax baddan kala socon sharuudaha? codbixinta inkastoo dhawaan la billaabay wacyigalin la xariirta sidii bulshada loo fahamsiin lahaa niddaamka cod bixinta muwaadiniinta reer Puntland iyo sharuudaha laga doonayo qofka codbixiyaha ah.
Sidoo kale waxaa jira siyaasiyiin,Nabaddoono,isimo iyo waxgarad baddan oo reer Puntland ah kuwaas oo aaminsan inaysan wakhtigaan suuragal ahayn in ?ay Puntland ka qabsoonto doorashooyinka golayaasha deegaanka kuwaas oo qaarka mid ay dhawaan ?soo saareen ?baaqyo ay ku muujinayaan dareenkooda ku aadan arimaha siyaasaddeed ee Punland.
Madaxwaynaha Puntland Dr C/raxmaan Shiikh Maxamed Maxamuud (Faroole) ayaa ku adkaystey in Puntland ay wajahdo lagana hirgalinayo ?niddaamka xisbiyada baddan kaas ?oo 15 bisha july 2013 la filayo in la qabto doorashooyinkii golayaasha degmooyinka ,waxaana uu intaas ku daray maadaxwayne (Faroole) inay Puntland ka gudubtey niddaamkii hore ee ?66 xubnood oo baarlamaanka ah ay wax dooran jireen iyagoo matalaya dhammaan shacabka reer Puntland.
Markii is bar-bar dhig lagu sameeyo aqoonta ay dadka reer Puntland u leeyihiin niddaamkaan xisbiyada baddan iyo miisaanka ay leeyihiin bulshada inta sida tooska ah u diidan doorashooyinkaan soo socda ayaa waxaa addag in la saaddaaliyo qabsoomida doorashooyin u dhaca si nabadgalyo ah oo hufan.
Haddii ay Puntland ka qabsoomaan doorashooyinka ku soo fool leh ee golayaasha deegaanka ayaa taarkhda waxaa ay noqonaysaa markii ugu horeysey ee ay Puntland ka qabsoomaan ?doorashooyin lamid ah.
Dhammaan doorashooyinkii horay uga dhacay Puntland tan iyo markii la dhisay 1998 ayaa waxaa ay ahaayeen kuwo baarlamaani ah waxaana madaxwaynaha iyo madaxwayne ku xigeenka soo dooran jirey 66 xibnood oo muddanayaal baarlamaan ah kuwaas oo matalaya ?shacabka reer Puntland.
Dowladda yamen oo dadka aan u dhalano soo galootiga ah sheegey inay xanuuno dalka soo galiyaan.